စာအုပ်အမည် - သံယောဇဉ်အဖွဲ့
စာရေးသူ - မင်းလူ
စာအုပ်တိုက် - ရွှေနှလုံးသား
ထုတ်ဝေသည့်ခုနှစ် - ၂၀၁၉ (ပဥ္စမအကြိမ်)
ဝတ္ထုရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုက စိတ်ဝင်စားစရာပါ။ ဝတ္ထုထဲမှာပါတဲ့ ဇာတ်ကောင်တွေရဲ့ တစ်ဦးပေါ်တစ်ဦး ညီရင်းအစ်ကိုမောင်ရင်းနှမလို ခင်မင်ကြပုံများကြောင့် သံယောဇဉ်(အစု)အဖွဲ့လေး ဖြစ်နေတယ်လို့ ယူလို့ရသလို သူတို့တွေရဲ့ မေတ္တာသံယောဇဉ်ဖြစ်ရပ်လေးတွေကို ဖွဲ့နွဲ့ပြထားလို့ သံယောဇဉ်အဖွဲ့(အနွဲ့)လို့ ယူရင်လဲ ရမယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့လက်ထက်မှာ မရှိတော့တဲ့ ကံ့ကော်တန်းနဲ့စိန်ပန်းပြာကို နောက်ခံထားတဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းလေး တစ်ပုဒ်ပါပဲ။ ခုတော့ဖြင့် ပညာရေး ဝေးသည်မရှိဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်နဲ့အညီ တက္ကသိုလ်တွေအားလုံးဟာ မြို့စွန်မြို့ဖျားတွေကို ရောက်လို့။ ခုနောက်ပိုင်းတော့ မိန်းထဲမှာ ဘာသာရပ်အချို့ ပြန်ဖွင့်ပြီလို့ သိရပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းကို ပြန်ဆက်ရရင်...
ဒီဇာတ်လမ်းရဲ့အဓိကဇာတ်လိုက်ကျော် ဟန်လင်းဟာ ရိုးသားအေးဆေးတဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းတော်သားလေးတစ်ယောက်ပါ။ အရက်မသောက်တတ်၊ လောင်းကစားမလုပ်တတ်၊ ကျောင်းစာမှာ ကြိုးကြိုးစားစားရှိတဲ့သူ၊ စာလိုက်နိုင်သူဆိုရင် မမှားပါဘူး။ သူမလိုက်နိုင်တာက တစ်ခုပဲရှိပါတယ်။ အဲဒါက မေတ္တာရေးပါ။ လမ်းမထက်က ကောက်ရခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားကတ်ပိုင်ရှင် ကျောင်းသူလေးကို သူမသိငါပိုးလုပ်တဲ့ အခန်းတွေဟာ မပြုံးဘဲမနေနိုင်လောက်အောင်ကို ကောင်းပါတယ်။ သူ့ကိုမသိတဲ့သူကို ကြည့်တာတောင် ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်နဲ့ရယ်။
ဒီနေရာမှာ ဒုတိယဇာတ်လိုက်လို့ဆိုရမယ့် သူ့သူငယ်ချင်းခင်မောင်လတ်နဲ့တော့ တစ်ခြားစီပါပဲ။ ဟိုက လူသွက်၊ မျက်နှာပြောင်ဆိုတော့ သူ့ထက်အရင် ရည်းစားရတာလဲ မဆန်းပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ခင်မောင်လတ် ရည်းစားရတာလဲ စိုင်ကော်လို့ ချုံပေါ်ရောက်ရတာမျိုးပါ။ ဖြစ်ချင်တော့ ခင်မောင်လတ်ရဲ့ချစ်သူမာလာကျော်နဲ့ ဟန်လင်းတစ်ဖက်သတ်ကြိတ်ပိုးနေတဲ့ ဆက်ဆက်တို့ဟာ တစ်ခန်းတည်းအတူနေ သူငယ်ချင်းတွေပါ။ ဟန်လင်းက ကြိုက်နေမှန်းမသိတဲ့ သူတို့အတွဲဟာ ဆက်ဆက်နဲ့ဟန်လင်း နီးစပ်ဖို့ အစွမ်းကုန် လှော်ကြပါတော့တယ်။ အချစ်ရေးမှာ အူကြောင်ကြောင်နိုင်တဲ့ ဟန်လင်းရဲ့ကြောင်ကွက်တွေက ဒီဇာတ်လမ်းမှာ မနည်းလှပါဘူး။ ပထမအကြိမ် ဖတ်ဖူးတုန်းကဆို သူ့ကိုယ်စား ကိုယ်က အားမလိုအားမရတွေ ဖြစ်နေမိတဲ့အထိပါပဲ။
ဒီဇာတ်လမ်းမှာ အားဖြည့်ကူညီတဲ့ဇာတ်ကောင်တွေက ဝင်းလွင်နဲ့တင်တင်တိုးတို့အတွဲရယ် ဟန်လင်းနဲ့တစ်ခန်းတည်းနေတဲ့ ထွန်းရွှေရယ်ပါ။ ထွန်းရွှေဟာ စာတစ်ပုဒ်လုံးမှာ လူကြီးအဆန်ဆုံး ဇာတ်ကောင်ပါပဲ။ ဘဝဒဿ နတွေ၊ အတွေးအမြင်တွေကို ဒီဇာတ်ကောင်ရဲ့စကားပြောတွေကနေပဲ ရေးပြသွားပါတယ်။ ကြုံတုန်း ဝင်းလွင်ရည်းစားထားပုံလေးကို လက်တို့ပါဦးမယ်။ သူနဲ့တင်တင်တိုးက ဆွေမကင်းမျိုးမကင်းဆိုတော့ ဝင်းလွင်ငွေလိုတိုင်း တင်တင်တိုးဆီက သွားချေးပါတယ်။ ချေးလိုက်၊ ပြန်မဆပ်နိုင်လိုက်နဲ့ ကြာတော့ သူ့မှာ အကြွေးစာရင်းက မနည်းတော့ပါဘူး။ "သူနဲ့ငါ ချစ်သူဖြစ်သွားတော့ သူ့အကြွေးတွေ ငါပေးစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့ကွ" တဲ့။ ????????
ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးအခန်းက ဆက်ဆက်ကို ဟန်လင်းက ရည်းစားစကားပြောတဲ့အခန်းပါပဲ။
"ကျွန်တော် ကျောင်းသားကတ်လေးကို ကောက်ရထားတာ ကြာပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ ပြန်မပေးဖြစ်ခဲ့ဘူး။ ဘာကြောင့် ပြန်မပေးဖြစ်သလဲဆိုတာတော့ မမေးပါနဲ့တော့ဗျာ။......................
စာမေးပွဲပြီးရင် ကျွန်တော့်ကို ဒီကျောင်းသားကတ်လေး ပြန်ပေးပါနော်" တဲ့။ ချစ်ဆိုတာတစ်လုံးမှ မပါဘဲ ရည်းစားစကားပြောသွားတာ။ ????????
ဆက်ဆက်ဆီက ကျောင်းသားကတ် ပြန်ရမရဆိုတာထက် ဆရာမင်းလူရဲ့ အရေးအသားနဲ့ သဘာဝကျတဲ့ဇာတ်ကွက်တွေကြောင့် စိတ်အပန်းပြေ ဖတ်သင့်တဲ့ စာတစ်ပုဒ်ပါလို့ ညွှန်းဆိုလိုက်ရပါကြောင်း။ (ဒီစာအုပ်ကို မေတ္တာရိပ်ရွေ့လျားစာကြည့်တိုက်မှ ငှါးဖတ်တာပါ။)
ဟန်လင်းလောက် အူကြောင်ကြောင်မနိုင်သော်လည်း အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင် ဟန်လင်းနီးနီး သတ္တိကောင်းတဲ့ ကျွန်တော့်ကို ကျွန်တော့်ရဲ့ဆက်ဆက်လေးနဲ့ အဆင်ပြေအောင် ဝိုင်းဝန်းကူညီ အရောက်ပို့ပေးခဲ့တဲ့ ကျွန်တော့်ကိုချစ်ခင်ကြတဲ့ ခင်မောင်လတ်များနဲ့ မာလာကျော်များကိုလည်း ဤဝတ္ထုဖတ်နေရင်း ပြန်လည်အမှတ်ရ ကျေးဇူးတင်မိပါကြောင်း။ ချစ်စကားတစ်လုံးမှ မပါတဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ ရည်းစားစကားဆိုပုံကိုတော့ ဤပို့စ်နဲ့ မသက်ဆိုင်ပါသဖြင့် ဆင်ဆာလုပ်လိုက်ရပါကြောင်း။ ????????